QR & ဘားကုဒ် Scanner | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » QR & ဘားကုဒ် Scanner
ထိုကဲ့သို့သော ISBN, Ean, UPC နှင့်အခြားသူများအဖြစ်အားလုံးအဓိကဘားကုဒ်ကိုပုံစံများကိုပံ့ပိုးသောအာဏာအရှိဆုံး QR ကုဒ်ကိုစာဖတ်သူကိုနှင့်ဘားကုဒ်ကိုစကင်နာ ...
ဤသည် QR codes တွေကိုနှင့်ဘားကုဒ်များ scan ဖို့ညစာအကျိုးရှိစွာ application ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဿုံနှင့်ချောချောမွေ့မွေ့အခါတိုင်းစိစစ်သည်။ ဒါ့အပြင်သူကသင့်ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူသင့်ရဲ့ဖုန်းသို့မဟုတ်ရှယ်ယာများတွင်ကယ်တင်နိုင်သော, သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဘားကုဒ်ကိုနှင့် QR ကုဒ်ကိုထုတ်လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
scanner သည် dynamically တစ်ခုတည်း panel ကိုအတွင်းအကြောင်းအရာအမျိုးအစား detect ။ အသုံးပြုသူကင်မရာမြင်ကွင်းကိုအပေါ်မျက်နှာပြင်ခလုတ်ကို semitransparent အားဖြင့်ကင်မရာ flash ကို, autofocus toggle နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဒါ့အပြင်ရှေ့နှင့်နောက်ကင်မရာအကြားကင်မရာ switching အတူတူ button ကိုအုပျစုထဲကနေအများကြီးလွယ်ကူပါတယ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
- ဘားကုဒ်များအပေါငျးတို့သ type ကိုစကင်ဖတ်
- QR codes တွေကိုအပေါငျးတို့သ type ကိုစကင်ဖတ်
- Toggle ကင်မရာ, flash ပါနှင့်အာရုံ
- barocdes နှင့် QR codes တွေကို Generate
- မှောင်မိုက်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် scan မှ Torch အလင်း option ကို
- အိမ်ရှေ့သို့မဟုတ်နောက်ဘက်ကင်မရာစကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှ Option ကို
- ဝက်ဘ်ပေါ်ဝေစုနှင့်ရှာဖွေရေး clipboard မှ Copy ကူးရလဒ်
- ဝေမျှမယ် scan ဖတ်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ပြီးရလဒ်
- စကင်ဖတ်စစ်ဆေးနေရလဒ်ကနေက်ဘ်ဆိုက် URL ကိုသွားလာရန်
- ဆင်းသက်လာ UI ကိုချောမွေ့စွမ်းဆောင်ရည်ကို
8.44 ကို MB
QR Code Scan & …
ဒီဇင်ဘာလတွင် 26, 2018 မှာ 6: 19 နံနက်
ကျား ya app ကို jio ဖုန်းကို chal sakta ဟက်တာ
သြဂုတ်လ 17, 2018 မှာ 12: 24 ညနေ
Rao အရှက်ကွဲခြင်း says:
ဇွန်လ 5, 2018 မှာ 6: 39 နံနက်
ဤသည်အလွန်အသုံးဝင်သော App ဖြစ်ပါတယ်
အလီ Rajai says:
ဧပြီလ 19, 2018 မှာ 9: 58 ညနေ
မတ်လ 21, 2018 မှာ 4: 20 ညနေ
အကောင်းဆုံး nzala says:
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 6, 2018 မှာ 6: 45 ညနေ
နိုဝင်ဘာလ 29, 2017 မှာ 3: 11 ညနေ
ချော်ရည်မျက်ဝန်းငါ့ကို whatascan Kam nahi kar raha ကြာကရင် 412
စက်တင်ဘာလ 13, 2017 မှာ 9: 21 နံနက်
သြဂုတ်လ 2, 2019 မှာ 9: 39 ညနေ
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 12, 2016 မှာ 10: 48 နံနက်
မတ်လ 25, 2015 မှာ 4: 25 ညနေ
နိုဝင်ဘာလ 8, 2014 မှာ 10: 59 နံနက်
ဇွန်လ 17, 2018 မှာ 12: 39 ညနေ
စက်တင်ဘာလ 25, 2014 မှာ 9: 29 နံနက်
ငါသည်အခြား Android အတွက်လျှောက်လွှာနှင့်အတူပေါင်းစပ်ဖို့ဒီကိုအသုံးပြုဖို့နိုင်သလား?
စက်တင်ဘာလ 12, 2014 မှာ 7: 32 ညနေ
ဒါဟာအကောင်းဆုံး app ကိုဖွင့်ပေမယ့် ...... သူကမကောင်းတဲ့တချို့ကြိမ်အလုပ်လုပ်တယ်
ဇူလိုင်လ 6, 2014 မှာ 3: 05 ညနေ
ကိုယ့်မိုဘိုင်းအတွက်ဘားကုဒ်ကိုစကင်နာကို အသုံးပြု. ငါ၏အစတော့ရှယ်ယာစစ်ဆေးငါ့ andorid ဖုန်းကိုနဲ့ငါ့ pc interlink ရန်ဆန္ဒရှိဒီ app ကိုလည်းမရှိ
ဇူလိုင်လ 6, 2014 မှာ 3: 03 ညနေ
ကိုယ့်ဖုန်းကိုစကင်နာ useing ခြင်းဖြင့်ငါ၏အ stok စစ်ဆေးငါ့ pc နှင့်အတူ mu ဟာ android ဖုန်းကို interlike ရန်ဆန္ဒရှိဖြစ်နိုင်သောဤ
ဧပြီလ 28, 2014 မှာ 4: 46 ညနေ
သင်သည်မည်သည့် QR စကင်ဖတ်စစ်ဆေးသည့်အခါက link ကိုပေးသငျသညျကိုလင့်ထားသောစာမျက်နှာများကိုဝင်ရောက်သည့်အခါကသင့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်ကိုပေးသည်
ဒီဇင်ဘာလတွင် 10, 2017 မှာ 10: 10 ညနေ
Addis Jean says:
ဇန်နဝါရီလ 14, 2014 မှာ 9: 25 နံနက်
ဘယ်သူ့ကိုမှဘယ်လိုကျွန်ုပ်၏ဖုန်းရဲ့ memory ထဲမှာ QR code ကို scan မှငါ့ကိုမပြောပြနိုင်ပါတယ်။
ဇန်နဝါရီလ 9, 2014 မှာ 3: 14 ညနေ
နိုဝင်ဘာလ 14, 2013 မှာ 10: 22 ညနေ
ဒါဟာကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုငါကငါ့ဖုန်းပေါ်မှာငါ့လျင်မြန်စွာရုံးမှစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့ configure သလဲ?
ဇန်နဝါရီလ 14, 2014 မှာ 9: 35 နံနက်
အောက်တိုဘာလ 1, 2013 မှာ 1: 57 ညနေ
စက်တင်ဘာလ 18, 2013 မှာ 3: 00 ညနေ
သြဂုတ်လ 22, 2013 မှာ 1: 53 ညနေ
ဇွန်လ 16, 2013 မှာ 2: 02 ညနေ
တကယ်ပဲအထောက်အကူဖြစ်စေ app ကို။
ဇန်နဝါရီလ 19, 2013 မှာ 4: 56 ညနေ
အဆိုပါအရာက ICS နဲ့ငါ့ nextbook တက်ဘလက်ပေါ်မစတင်ပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်
ဒီဇင်ဘာလတွင် 5, 2012 မှာ 4: 45 နံနက်
အကောင်းဆုံး app များကို 10 / 10